भोलि यी पाँच बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको साधारण सभा हँदै, कुनले कति लाभांश पारित गर्ने ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैकिङ > भोलि यी पाँच बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको साधारण सभा हँदै, कुनले कति लाभांश पारित गर्ने ?
भोलि यी पाँच बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको साधारण सभा हँदै, कुनले कति लाभांश पारित गर्ने ?
काठमाडौं । भोलि सनराइज बैंकसहित ५ ओटा कम्पनीको साधारण सभा हुने भएको छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक, सनराइज बैंक, आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था,महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था र सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीको साधारण सभा हुन लागेको हो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले एभरेष्ट होटल नयाँ बानेश्वरमा विहान १२ः१५ मा साधारण सभा बोलाएको छ ।
सभाले ७ प्रतिशत बोनस शेयर र ४ दशमलव ८४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । उक्त कम्पनीको लाभांश पुस ८ गते सम्म कायम शेयरधनीले पाउनेछन् ।
त्यसैगरी आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एशियन होटल बुटवलमा बिहान ९ बजे साधारण सभा बोलाएको हो । सभाले ९ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
उक्त कम्पनीको लाभांश पुस ९ गते सम्म कायम शेयरधनीले पाउनेछन् । सनराइज बैंकले अम्रपाली ब्याक्वेंट काठमाडौंमा बिहान १० बजे साधारण सभा बोलाएको छ । सभाले ५ दशमलव ८ प्रतिशत बोनस शेयर २ दशमलव ४८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । उक्त कम्पनीको लाभांश पुस ६ गतेसम्म कायम शेयरधनीले पाउनेछन् ।
महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेमा बिहान ११ बजे साधारण सभा बोलाएको छ ।सभाले शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । त्यसैगरी सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले पनि बिहान ११ बजे साधारण सभा बोलाएको छ ।
सभा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सभाहल धुम्रबाराहीमा हुने बताएको छ । सभाले आव २०७६र ७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नेछ ।
२०७७ पौष २३ गते १२:३९ मा प्रकाशित
पवित्र धार्मिकस्थल हलेसी मन्दिरमा एक महिनामा छ लाख भेटी संकलन
काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकामा थप कडाइ
डाउनपेमेण्ट नपुगेर गाडी किन्न सक्नुभएन ? तपाईलाई खुशीको खबर छ
सरकारले फेरि १५ दिन लकडाउन थप्ने !